India dia mangataka kaompaniam-pitaterana an-tserasera mba tsy hanidina ireo mpandeha sinoa ho any amin'ny firenena
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » India dia mangataka kaompaniam-pitaterana an-tserasera mba tsy hanidina ireo mpandeha sinoa ho any amin'ny firenena
Nangataka tsy ara-potoana ny mpitatitra fiaramanidina an-trano sy iraisam-pirenena ny manampahefana indiana mba tsy hampidina mpandeha sinoa any India.
Ny hetsi-panoherana mahery vaika nataon'i India dia taorian'ny fanerena tsy dia malemy paika nataon'i Sina hanakanana ireo teratany karana tsy hiditra ao Shina, zavatra iray izay vao maika nahenjana hatramin'ny Novambra.
Na dia mihantona aza ny sidina eo anelanelan'i India sy Shina, dia misy teratany sinoa afaka mivezivezy araka ny fenitry ny vahiny ankehitriny fa nanao izany tamin'ny alàlan'ny fanidinana voalohany tany amin'ny firenena fahatelo izay manana bizina fitsangantsanganana i India. Ary avy eo, manidina mankany India izy ireo. Ho fanampin'izany, ireo teratany sinoa monina any amin'ny firenena manjavozavo an'habakabaka koa dia nanidina nankany India avy any noho ny asa sy ny orinasa.
Nandritra ny faran'ny herinandro lasa teo, nangatahina manokana ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka - na karana na vahiny - mba tsy hanidina teratany sinoa any India. Amin'izao fotoana izao, ny visa mpizahatany mankany India dia mijanona mihantona, fa ny vahiny kosa avela handeha eto am-piasana ary sokajy visa tsy mpizahatany hafa. Ny loharanom-baovao avy amin'ny indostria dia milaza fa ny ankamaroan'ny teratany sinoa manidina mankany India dia avy amin'ny firenena misy rivotra ao Eropa.
Toa nisy ny seranam-piaramanidina sasany nangataka tamin'ny manampahefana Indiana mba hanome zavatra an-tsoratra azy ireo mba hahafahan'izy ireo manome antony handavana ny fidirana amin'ireo teratany sinoa voasoratra amin'ny sidina mankany India araka ny fanao mahazatra ankehitriny.
Ny valintenin'i New Delhi dia tonga rehefa tafahitsoka amina seranan-tsambo sinoa isan-karazany ny tantsambo indianina satria mandà ny hamela azy ireo hiantsona, na hanova ekipazy mihitsy aza i Shina. Niantraika tamin'ny karana efa ho 1,500 XNUMX nanompo tamin'ny sambo mpivarotra saina iraisam-pirenena izany satria tsy afaka nody intsony izy ireo.
Na dia i Aostralia aza no kendrena, izay voararan'i Shina ankehitriny, ny indianina tantsambo dia nanao fiantohana lehibe ary toa tsy vonona ny hikarakara fanampiana vonjimaika i Beijing.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra, nampiato ny fidiran'ny teratany vahiny mitazona visa na fahazoan-dàlana sinoa manan-kery avy amin'ny firenena sasany ao India noho ny areti-mandringana i Sina.
Jamaika: Ny tena dikan'ny faharetan'ny fizahan-tany
Airbus dia namporisika ny valiny 'mety' an'ny UE ho an'ny tarif amerikana vaovao